SimplyCast: Mutengi Kuyerera Platform Kukurukurirana | Martech Zone
SimplyCast: Mutengi Kuyerera Kukurukurirana Platform
Muvhuro, April 7, 2014 Chitatu, Ndira 21, 2015 Douglas Karr
The SimplyCast 360 Automation Maneja inosanganisa zvinobuda gumi nematanhatu muchikamu chimwe chete, zvichigonesa marekters kuvaka otomatiki kushambadzira kushambadzira uye kuyerera kuyerera. Mhinduro yavo inokutendera iwe kuti usvike kune vanhu chaivo panguva yakakodzera nenzira yavo yavanofarira yekutaurirana. Bata nevatengi uye tarisiro zvichibva pane zvakachengetwa dhata, zvido zvavo, uye kudyidzana kwavo kwakapfuura nesangano rako kuti uwedzere kudzoka kwako mukudyara.
The SimplyCast Kushambadzira otomatiki mhinduro inokutendera iwe kumisikidza yako mishandirapamwe senge inoyerera chati, ichikubvumidza iwe kuti usvike uye ubatanidzane netarisiro yako uye vatengi kuburikidza nenzira dzakawanda:
Customer Relationship Management - Ziva chaizvo avo vatungamiriri vako vanopisa vari uye maitiro ekukwezva kune zvavanoda.
Email Marketing - Gadzira, tumira uye uteedzere email kushambadzira.
Chinyorwa Chinyorwa - Gadzira, ponesa & chidimbu chako chemazita ekuremekedza ane risingagumi chengetedzo chinzvimbo.
Form Builder - Gadzira mafomu epamhepo nechinhu chiri nyore pamusika. Hapana ruzivo rweHTML runodikanwa.
Mapeji ekutumira - Iyo inokurumidza uye yakapusa nzira yekugadzira akawanda ekumhara mapeji kuitira kuti utarise kuti ndeipi peji rinoshanda zvakanyanya.
Online Surveys - Gadzira uye tumira kuongororwa kwepamhepo kunodhonza mushandisi mhinduro mumaminetsi.
Batanidza Kuchengeta - Nyore tarisa kubaya-kuburikidza uye akavhura mareti kubatsira kuona kuti ndeupi kushambadzira kuri kushanda zvakanyanya.
autoresponder - Vaka hukama hwakasimba uye hwepedyo neyakagadziriswa yekutevera mhinduro.
Yevatema Yekuongorora - Usatore mukana pane yako ekushambadzira zvigadzirwa uye mukurumbira. Kutanga kuongorora IP yako nhasi.
Fax Kushambadzira - Tumira fakisi inoputika kuzviuru zvemasangano pasina dambudziko. Yakanakira kunongedza mabhizinesi emuno.
Event Management - zviitiko zvechiitiko zvine maturusi ekuwedzera kupinda.
Nhepfenyuro Yezwi - Ramba uchitepfenyura akanyorwa mazwi ezwi kuzivisa nekuyeuchidza vatengi vako.
Text Kushambadzira - batanidza nevatengi vako nekuisa meseji yako mumaoko avo.
Kushambadzira Kwemagariro - sangana neyakakurumbira masocial network nhasi, kusanganisira Facebook neTwitter.
Tags: autoresponderblacklist yekutarisaEmail MarketingChiitiko manejimendiFacebookFaxFax marektingfomu muvakipamapejirunyorwa manejimendionline ongororozvikamukushambadzira kwevanhukushambadzira mamesejiTwitterkutepfenyura nezwi